रेट्रो दल लागि ठाँउ - "बार डिस्को 90"
खाद्य र पेय पदार्थ, रेस्टुरेन्ट समीक्षाहरू
छैन "Tverskaya" मेट्रो मास्को मा स्टेशन बाट टाढा आजको युवा क्लब, को 90 को दशक को शैली मा डिजाइन गर्न आकर्षक छ। यसको नाम यो सबै यसो भन्छन्: "बार डिस्को 90"। यो हँसिलो निरन्तर वातावरण, हालै पछिल्लो शताब्दीमा प्ले चर्को संगीत शासनकालमै कि यहाँ छ, र bartenders स्वादिष्ट उम्दा सिर्जनाहरू पाहुनाहरूसँग प्रसन्न हुन्छु।
रेस्टुरेन्ट को भित्री को 90 को दशक को शैली मा डिजाइन गरिएको छ, यहाँ सबै perestroika को अवधि को reminiscent छ। किन पट्टी "पहिले जस्तो" आफ्नो पर्खाल सबै प्रशंसक धेरै आकर्षित छ।
क्षेत्र द्वारा, रेस्टुरेन्ट त्यहाँ दुई बारहरू र केही ठाउँहरू, आराम गर्ने आगोको नृत्य बीच पाहुना समायोजित गर्न सक्छन् जो एउटा सानो कोठा ओगटेको छ। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ सुविधाजनक zoning हल संस्था - यो अन्य यात्री संग interfering बिना, आफ्नो कम्पनी मा साँझ खर्च गर्न अनुमति दिने, कुल पार्टी बाट टेबल केही निलम्बित भने कि यस्तो तरिकाले प्रबन्ध छ। हामी सामान्य मा मूल्याङ्कन भने, भित्री धेरै सरल, कुनै पनि तामझाम बिना छ।
अतिथिहरूको संस्थाहरू अलग प्ले मनोरञ्जन क्षेत्र privlekaettakzhe। जहाँ सबैलाई संसारमा मनोरञ्जन अन्तिम शताब्दीको 90-एँ, प्रवेश गर्न सक्छन् प्ले यो कन्सोल "Dandy" र "देखा"। क्लब मा उपलब्ध छ जो एक अलग दोकान, मा, तपाईं पनि केही paraphernalia 90 को दशक, उदाहरणका लागि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, सोडा "डा मरिच" वा चुइगम "प्रेम छ ..."।
युरोपेली र इटालियन भोजन सेवा "बार डिस्को 90" यसको अतिथि प्रस्ताव तयार छ। मेनु, यो रेस्टुरेन्ट प्रकाश सलाद ( "caprese", "सम्राट्लाई", "ग्रीक", तातो मसला मा चिकन स्तन संग, ताजा तरकारी संग "घर") प्रदान गर्दछ, तातो र चिसो appetizers (कुखुराको पखेटा "भैंसी", tartar मासु, croutons लसुन, "क्लब-सैंडविच", विभिन्न मिश्रित), र पहिलो संग - सूप ( "Miso सूप" सूप "टम Yam" porcini मशरूम को सूप)।
अमेरिकी छिटो खाना को प्रशंसक लागि खाना पकाउन कि संस्थाहरू रेल धेरै कोमल र रसदार ( "बीफ बर्गर," "Dzhek Deniels", "Tsveytsarsky" प्याज छल्ले संग) छ बर्गर प्रकारका छन्।
इटालियन व्यञ्जन यहाँ प्रस्तुत छ: को पिज्जा ( "चार चिज", "Pancetta", "Margarita", "को BBQ," "हवाइ", "मेक्सिकन"), पास्ता, risotto, fetuchchini।
व्यावसायिक शेफ स्वादिष्ट भोजन मा (विभिन्न मासु, पाठो, Kebab, समुद्र बास ग्रील्ड को skewers को coals, तरकारी मा Dorado) ग्रिल मा तयार, साथै ग्रील्ड मासु (सस संग "Demi ग्लास" बीफ कबाब, चिकन एशियाली-शैली टर्की बर्गर)।
गर्मी समयमा, संस्था एक मौसमी मेनु संग देखिन्छ। यो सलाद "अमेरिकी Cobb", "पुनर्जागरण" खाजा को बाल्टिक smelt, भू-मध्य चिसो सूप को "Ceviche" "Gazpacho" savoy बन्दागोभी र धूम्रपान कड खुर्सानी र पालुङ्गो संग, भरी बाछाको मासु पूरा गर्न सम्भव छ।
बार मेनु रक्सी र ककटेल को एक किसिम संग replete छ। पारवहन दुई बारहरू, प्रत्येक जो व्यावसायिक bartenders काम छ। तिनीहरूले कला आफ्नो काम संग आगंतुकों चकित गर्न सक्षम छन्। यो स्थापना bartenders मेनु ( "Margarita", "लङ आइल्याण्ड," "Tequila सूर्योदय," "Pina Colada", "को बीच मा सेक्स," "नीलो Lagoon") कुनै पनि ककटेल जस्तै तयार गर्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नो विशेष ककटेल बनाउन, जो अतिथि कहीं प्रयास छैन।
को यहाँ शुद्ध रक्सी वोदका, रम, liqueur, जस, रक्सी, Armagnac, whiskeys, आउटडोर को एक सभ्य चयन प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। तर, मुख्य मादक पेय प्रतिष्ठानबाट - यो शायद बोतल र ट्याप गर्नुहोस् बेचिन्छ छ जो बियर छ। संसारको विभिन्न भागबाट उहाँलाई यहाँ ल्याऊ।
मादक पेय र ककटेल बाहेक, त्यहाँ पनि नरम छन्। उदाहरणका लागि, बार मेनु मास्को मा "बार डिस्को-90" चाय र कफी को उत्कृष्ट चयन प्रदान गर्न, कागति पानी, शीतल पेय रद्द गर्न, र ताजा रस बनाउन तयार छ।
संस्था निरन्तर अतिथि को एक ठूलो संख्या द्वारा भ्रमण छ भन्ने तथ्यलाई कारण, प्रशासन को लागि यात्रा अघि अग्रिम तालिका बुक गर्न सिफारिस गरिएको "बार डिस्को-90।"
"बार डिस्को 90" - यो जसमा इन्टरनेट (वाइफाइ), हुक्का धूम्रपान, जो, प्रसंगवश, मान्नेहरूले आफ्नो गायन देखाउन जहाँ एक अलग कराओके क्षेत्र, मा clog व्यावसायिक हुक्का र बिदा को संभावना निःशुल्क पहुँच छ पारवहन छ क्षमता।
संस्था मा हरेक शुक्रबार राति र शनिबार जो देखि ट्रयाक डीजे साथ दिनु हल्ला दल र discos, आयोजना गरिन्छ "रेट्रो ध्वनि प्रणाली। घुमावदार साथै» तपाईं 90 को दशक को चिरपरिचित हिट सुन्न सक्नुहुन्छ घोला जान सक्छ।
जो एक संस्थाले मा कार्य मूल्य निर्धारण लागि, यो मास्को लागि एक अपेक्षाकृत कम मूल्य छ। प्रति व्यक्ति औसत खर्च लगभग 1500-2000 rubles छ।
संस्थाले को ठेगाना र सञ्चालनको मोड
"बार डिस्को 90" मात्र शुक्रवारका र शनिवार6बजे मा आगंतुकों यसको ढोका खुल्छ र अनुमति मास्को युवा र रेट्रो डिस्को को प्रशंसक लामो सबै रात चोर्नु,6बिहान सम्म खुला छ।
यो संस्थाले निम्न ठेगानामा पाउन सकिन्छ: मास्को, Nastasiinsky लेन 4, ब्लक2(ल्यान्डमार्क - मेट्रो स्टेशन "Tverskaya", छैन होटल "Pushkin" बाट टाढा), राजधानी (जिल्ला काओ) को Tverskoy जिल्ला स्थित छ जो।
परिवार बिदा र विवाह लागि डिजाइन रेस्टुरा (ऊफा), - "मेरिना"
जहाँ कजान पट्टी "Snob" मा जाने
"हस्ताक्षर" (रेस्टुरेन्ट), Altufyevo: समीक्षा
रेस्टुरेन्ट Serpukhov: एक सिंहावलोकन
रेस्टुरेन्ट Cherepovets: दर्जा, फोटो, समीक्षा
रेस्टुरेन्ट "Khlebnikov" मा "Lakada": आधारभूत जानकारी, मेनु र समीक्षा
रकेट launchers - "Whirlwind" गर्न "Katyusha" बाट
Convectors बिजुली Timberk: विवरण र समीक्षा
Nitrofurantoin: प्रयोग, मूल्य लागि निर्देशन
Numismatists र संग्रहकर्ता लागि अद्वितीय मंच
रेडियोधर्मी दूषण: सत्य र कल्पना
को उद्घोषकहरू - यो शक्ति heralds
पारिवारिक जीवन को संकटहरूको सबै हुन!
लेडी गागा मेकअप बिना। जीवनी अमेरिकी गायक
Cramped खुट्टा भने, के गर्ने? सुझाव
एल ग्रिको गरेको चित्रकला "गणना Orgaz को दफन": वर्णन, रोचक तथ्य र समीक्षा
Jinxed: के? उपयोगी आशय